ကောင်းကင်ကို: 08/01/2013 - 09/01/2013
There’sagang called ‘Nine-Six-Nine’
Most of its members are religiously blind
They urge people to shunareligious community
Mobsters united against victims are creating disunity
So-called Buddhists illogically cry that they love Buddhism
But they dare not know that they are trapped in racism
So if someone highlights their racial and religious discriminations
They will label him ‘a Kalar’, making groundless allegations
[Note: Kalar =apejorative term for people of Indian descent and Muslims]
The one allowed to spread hate speech isa‘969-Buddhist vicar’
Contrarily you can be sentenced to two years just for removinga‘969-sticker’
But even some human rights champions are reluctant to say that it is not fair
Consequently sectarian violence may be in the air
Some people wonder whether there isamastermind
Surely! Certainly! The Big Brother hasapolitical axe to grind
Moreover some ordinary people are also expressing their racial animosity
Some familiar faces are creating Timelines full of prejudice,areal moral monstrosity
Despite the government’s serious wrongdoings
Blaming it alone to hide our communal hysteria is not an effective solution
I often timidly dream that we put ourselves in victims’ shoes and makeamoral revolution
by Kaung Kin Ko [27 August 2013]
Posted by Kaung Kin Ko at 4:48 PM3comments:
ပရီးမီးယားလိဂ် နန်းလုပွဲ အကြို (၂၀၁၃-၂၀၁၄)
ဘေးလ်း ဆက်မနေရင်လည်း အသက်ပြင်းပါစေ။
လူမျိုးရေးလိုလို ခွဲခြားပြီးလည်း မမိုက်နဲ့တော့
လူဆိုးလေးလိုလို ပဲများပြီးလည်း မကိုက်နဲ့တော့။
မနှစ်ကပွဲမှာ ၁ ကနေ ၇ အထိ ရခဲ့တဲ့ အသင်းတွေထဲကနေ အဲဗာတန်ကို ချန်ခဲ့ပြီးတော့ အစဉ်လိုက် ရေးထားတာပါ။
Posted by Kaung Kin Ko at 6:04 PM3comments:
Labels: My poems, ဘောလုံးကဗျာ
ကွင်းထဲမှာ “ဘုရင်”လိုကျင့်၊ ကွင်းပြင်မှာ “သူတောင်းစား”လိုကျင့်
ဘောလုံးသမား တော်တော်များများရဲ့ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာဘဝ တွေမှာ အကျင့်ဆိုးတွေ ရှိကြပါတယ်။ ဂျမေကာ ဘောလုံးသမားတွေမှာလည်း အတူတူပါပဲ။ [ဒါကြောင့် ကစားကွင်းပြင်ပ ဘဝမှာလည်း] ဘယ်လိုကျင့်ကြံနေထိုင်ခြင်းအားဖြင့် ကောင်းမွန်တဲ့ လူသားတွေ ဖြစ်လာနိုင်ကြောင်း ဘောလုံးသမားတွေကို ပြသပေးခြင်းနဲ့၊ ခုနကပြောခဲ့တဲ့ အချက်ကို ကျနော် ချေဖျက်ချင်ပါတယ်။ သူတို့ဟာ ကစားကွင်းထဲမှာ မာန်ပါပါနဲ့ ကစားပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှု ရှိနေကြမယ် ဆိုရင် [ပြိုင်ဘက်တွေ အနေနဲ့] သူတို့ကို အနိုင်ယူဖို့ ခက်ကြမှာပါ။ [အဲဒီလိုပဲ] သူတို့ဟာ တခြားအချိန်တွေမှာ၊ သူတောင်းစား တယောက်လို တင်းတိမ်ရောင့်ရဲမှုမျိုးနဲ့ ရိုးရိုးကုပ်ကုပ် နေနိုင်မယ်ဆိုရင်…လူသားတွေ အနေနဲ့ ဘယ်လို ပြုမူသင့်ကြောင်း နည်းလမ်းမှန်ကို ကျနော်တို့ကို ပြသခဲ့တဲ့ ခရစ်တော်ရဲ့ ပုံစံအတိုင်း နေထိုင်ကျင့်ကြံခြင်းပါပဲ။
(၁၉၉၇ ခုနှစ်က ဂျမေကာ ဘောလုံးအသင်း နည်းပြ ဘရာဇီးလူမျိုး Rene Simoes အင်တာဗျူး တခုမှာ ဖြေသွားခဲ့တဲ့ စကားပါ။ http://www.fifa.com/worldfootball/news/newsid=71965.html )
ဘာသာပြန်သူ … ကောင်းကင်ကို
Many footballers have bad personal habits, and Jamaica is no different. I want to counteract this by showing the players how they can be good human beings too. If they show pride and self-confidence on the pitch and behave like kings they will be hard to beat. If they can be modest at other times, satisfied with little asabeggar would be, then they are living in the image of Christ who showed us the correct way to behave as human beings. (Rene Simoes)
Posted by Kaung Kin Ko at 7:42 PM No comments:
Labels: ဘာသာပြန်, အတွေး
ကွင်းထဲမှာ “ဘုရင်”လိုကျင့်၊ ကွင်းပြင်မှာ “သူတောင်း...